Wasiirka Arrimaha Dibadda XFS oo khudbad dhinacyo badan leh ka jeediyay Shir Madaxeedka Carbeed ee Tunisia
April 1, 2019 admin Wararla Gudaha 0
muqdishoWasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad oo matalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa khudbad ka jeediyay shir madaxeedkaka Jaamacadda Carabta ee ka dhacay magaalada Tunis ee caasimadda Tunisia.
Wasiir Cawad oo khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay shirka ayaa ka warbixiyay horumarrada iyo caqabadaha ka jira Soomaaliya.
Waxa uu wasiirku sheegay in dowladda Soomaaliya ay horumarro wax ku ool ah oo muuqda ka sameysay dhinacyada dhaqaalaha, Federaalka, Dib u heshiisiinta, Dib u eegista Dastuurka, amniga iyo dib u heshiisiinta.
Wasiirka ayaa tilmaamay in dowladdu ay mudnaan gaar ah siisay xoojinta kaalinta haweenka iyo dhallinyarada, iyadoo u sameysay shaqo abuur maadaama ay qeyb weyn ka yihiin bulshada Soomaaliya.
Danire Axmed Ciise Cawad ayaa ka dalbaday Jaamacadda Carabta in ay dar-dar geliyaan dhammaan go’aannadii iyo arrimihii Soomaaliya khuseeyay ee horay loo gaaray, si ay Soomaaliya ugu guuleysato dib u dhiska iyo horumarinta dalka.
“Waxaan ka codsaneynaa walaalaheenna carabta in la fuliyo go’aannadii Soomaaliya khuseeyay ee lagu qaatay shir madaxeedyadii hore sida: Cafinta deymihii dibadeed ee Soomaaliya lagu lahaa, Taageeridda Miisaaniyadda Dowladda, Dib u dhiska,taageeridda hay’adaha kala duwan ee dowladda iyo dhowrista midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya” ayuu ku yiri khudbaddiisa Danjire Axmed Ciise Cawad.
Wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo la xiriira dalalka carabta sida Falastiin, Liibiya, Suuriya. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay taageersan tahay in dadka Falastiin helaan xaqooda iyo dowladdooda xorta ah
Dhanka Suuriya waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay taageereyso midnimada dhuleed ee Suuriya, waxa uuna tilmaamay in buuraleyda Golan Heights ay tahay dhul Suuriya leedahay oo ay xoog ku haysato Israel.
Wasiir Cawad ayaa sheegay in Soomaaliya ay taageereyso dadaallada dowladda sharciga ah ee Liibiya ku dooneyso inay nabad ku soo dabbaasho Dalkeeda.
Waxa uu kaloo tilmaamay in dowladda Soomaaliya bogaadineyso dadaalka beesha caalamka iyo Ergayga QM ku doonayaan xal u helista colaadda ka taagan Yemen.
Wasiir Cawad ayaa cambaareeyay Naceybka ka dhanka ah Muslimiinta ( Islamophopia) ee ka socda dalalka galbeedka, waxa uuna ku tilmaamay nooc ka mid ah cunsuriyadda.
Waxa uu ammaan gaar ah u jeediyay dowladda New Zealand sidii ay u maareysay xasuuqii dad muslimiin ah loogu geystay labo masjid oo ku yaalla dalkaas.
Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad oo matalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa khudbad ka jeediyay shir madaxeedkaka Jaamacadda Carabta ee ka dhacay magaalada Tunis ee caasimadda Tunisia.
Duqa Muqdisho oo faray laamaha Amniga in Caddaaladda la horkeeno Askari dilay Bajaajle
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Guddoomiyay Shirarka Tubaha Dhaqaalaha iyo Amniga+Sawirro